နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: * ရူးသွပ်ရင်ဖြစ်မယ် * ဆရာဝေမိုးနိုင်ရဲ့ (တဂ်ပို့စ်)
* ရူးသွပ်ရင်ဖြစ်မယ် * ဆရာဝေမိုးနိုင်ရဲ့ (တဂ်ပို့စ်)
ဆရာ့ရဲ့ တဂ်ပို့စ်ခေါင်းစဉ်လေးကို ဖတ်ပြီး မိုးနတ်အဖြစ်နဲ့ တူနေပါရောလားလို့ ပထမဆုံးတွေးမိတယ်..
အဲဒိလိုတွေးလိုက်မိလို့လဲ ဆရာ့ရဲ့ တဂ်ပို့စ်လေးကို တခြားသူတွေလို ဗဟုသုတရစရာ အတွေ့အကြုံ အသိအမြင်တွေနဲ့
စိတ်ကူးရမိတယ်.....( မိုးနတ်က အဲလောက်မှ
၀မ်းစာမပြည့်သေးတာ၊ အဲဒါကြောင့် ပါးနပ်စွာနဲ့
ကိုယ်ရေးနိုင်မဲ့ အကြောင်းအရာလောက်နဲ့ပဲ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေဆီ ပေးဖို့ရည်ရွယ်တာပါ.....
တကယ်ကတော့ လူလည်ကျလိုက်တာပေါ့နော်.....:P) ထားပါလေ.....အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်လွဲသွားအုံးမယ်...
ပထမဆုံး မိုးနတ်ကဗျာတွေ ရေးဖြစ်လာပုံက စပြောမယ်နော်... ဆန်းတော့လဲ ဆန်းကြယ်သား..ဘာကြောင့်ဆို...ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ကူးယဉ်တတ်မှာစိုးလို့.... အဖေက အချစ်ဝတ္ထုတွေ ပေးမဖတ်ပဲ
အောင်မြင်ရေး.. စီးပွားရေး..ကြီးပွားရေးစာအုပ်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ မိုးနတ်က အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်ကဗျာတွေ
ရေးတတ်လာတာ ရေးဖြစ်လာတာကိုပါ......ဒါပေမဲ့လဲ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ တချိန်မဟုတ် တချိန်မှာတော့ လွမ်းဖူးကြတာပဲလေ...မိုးနတ်လဲ လူထဲက လူတစ်ယောက်ဆိုတော့ ရင်ခုန်သံမပါပေမဲ့လဲ
အချစ်လို့မမည်ပေမဲ့လဲ သံယောဇဉ်ကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လွမ်းဖူးတယ်...
အဲဒါလဲ သေချာတွေးကြည့်ရင် ဆန်းတော့မဆန်းဘူးထင်တာပဲ..
အဲဒိနေ့က စတာပဲ....ခုလိုပဲ မိုးသဲသဲမဲမဲ ရွာနေတဲ့တစ်နေ့မှာပေါ့...
အဲဒိနေ့က လွမ်းလိုက်တာ သူ့ကိုလေ...ပြောမပြတတ်အောင်ကို
လွမ်းတယ်.....ရွာနေတဲ့ မိုးတွေကိုကြည့်ပြီး စာရွက်ဖြူဖြူလေးပေါ်ချရေးလိုက်တာ မထင်မှတ်ပဲ
ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားတယ်....အဲဒိနေ့မှာပဲ ကဗျာတွေကိုလဲ စွဲလန်းသွားခဲ့တယ်.....စစချင်းတော့ မိုးနတ်ရဲ့ ကဗျာတွေက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ပဲ သီးသန့်လိုလို ဖြစ်ခဲ့တယ်
နောက်ပိုင်းကျတော့ တဖြေးဖြေး ရေးရင်းရေးရင်း
ကိုယ့် ၀ါသနာပါရာ ဘူမိနက်သန်ဟာ ကဗျာတွေ
စာတွေပါလားဆိုတာ အံ့သြစွာနဲ့ သိခဲ့ရတယ်.......
၀မ်းသာလိုက်တဲ့ ဖြစ်ချင်း......ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားလို့လေ......အဲဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်..
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာဖြစ်ချင်လဲ မသေချာတဲ့သူဟာ ဘယ်အောင်မြင်မှုမျိုးကိုမှ ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါ
စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်......ဒါပေမဲ့လဲ မမျှော်မှန်းရဲသေးတဲ့ အခြေအနေမို့ ဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ထဲ
ကျိတ်ပြီး ကဗျာတွေရေးရင်း ကိုယ့်ဝါသနာကို ဆက်လက်မွေးမြူခဲ့တယ်......တစ်ခုလောက်
ဖြတ်ပြောပါရစေနော်......မိုးနတ်အဲလောက်ထိ နိဒါန်းချီနေရတာ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းရှိပါတယ်....
ပြောခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ......မိုးနတ်က အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးထဲမှာ စည်းကမ်းကြီးတဲ့ အဖေရဲ့ လမ်းကြောင်းပေးမှုကို ငယ်ငယ်ကတည်း ခံခဲ့ရတော့ သူများတွေလို ဆရာဝန်မှ အင်ဂျင်နီယာမှ ဘာမှ ညာမှရယ်လို့ အတွေးမရှိခဲ့ဘူး.....မိုးနတ်တို့မိဘတွေက အခုလောက်အခြေအနေရောက်အောင်တောင်
(အဲလိုဆန္ဒမျိုးကတော့ မိဘတိုင်းမှာ ရှိတာပါ.....
အဲ.......ဒါပေမဲ့ ပြောချင်တာက မိုးနတ်ကိုယ်တိုင်လဲ
ငါကြီးလာရင် အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရမယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးခဲ့တာ.......တွေးခဲ့တဲ့ အတိုင်းလဲ ထိုက်သင့်သလောက်တော့ ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်...
ဒါပေမဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေကို တစိုက်မတ်မတ်ရေးဖြစ်မယ်လို့တော့
မိုးနတ်ရူးသွပ်ခဲ့တဲ့ အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းပေါ့........နောက်တစ်ချက်က ဘလော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါ......ကဗျာတွေ အတော်
အမှတ်တရအနေနဲ့စုစည်းထားချင်ပြီ......သယ်ရင်းတွေကိုလဲ ချပြချင်လာပြီဆိုတဲ့ အခါမှာ မိုးနတ်က FB ထက် ဘလော့ကို အရင်ဦးဆုံးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်.....ဘာကြောင့်ဆို မိုးနတ်အဖေ၀ယ်လာပေးတဲ့ အဆင့်မြင့်အင်တာနက်
အသုံးပြုနည်းဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာ ဘလော့တစ်ခုကို အခမဲ့ဖန်တီးနိုင်တယ် ဆိုတာသိရတော့
ကိုယ်ပိုင်ဘလော့လေးဖွင့်ချင်မိတယ်......သူက သီးသန့်ဖြစ်တယ်လေ...အဲဒါကြောင့် အခွင့်အရေးရတဲ့ တနေ့မှာ
မိုးနတ်ကြိုးစားပြီး ဘလော့လေးကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်....
အဲဒိရက်မှာမှ လိုင်းတွေကလဲ မကောင်းဘူးရှင်...ဒါပေမဲ့ မိုးနတ်ကံကောင်းပါတယ်.....ဖွင့်ဖွင့်ချင်း မိုးနတ်ဘလော့လေးကို
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်...ပြီးတော့ စီနီယာ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေနဲ့လဲ ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တယ်......သူတို့တွေရဲ့ ဖေးမမှုတွေနဲ့
မိုးနတ်အိမ်လေးက ခုလို ရှင်သန်နေနိုင်တာပါ.....
ဘလော့မှာ စာရေးတာ ကဗျာရေးတာများ အဆန်းလုပ်လို့ပေါ့.....
အဲဒါက အခွင့်အရေးရတဲ့ လူတစ်ချို့အတွက်ပေါ့.....
စာရေးဆရာဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံမည်တစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့
စာပေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်ရပ်တည်ဖို့ မနီးစပ်သူတွေ
မိုးနတ်ဖြစ်ချင်မိတဲ့ ရူးသွပ်တဲ့ အိပ်မက်လေးကို ပြောပြပါရစေရှင်...
မိုးနတ်ရဲ့ အိပ်မက်လေးက မြန်မာပြည်အနှံ့ ကမ္ဘာအနှံ့ကို အလည်သွားရင်း အဲဒိကရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့
စာတွေ ကဗျာတွေ ဖန်တီး ထုဆစ်ချင်မိတာပါ.....
အဲဒိအိပ်မက်လေး လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ မိုးနတ်က ရူးသွပ်နေတယ်ရှင့်.......ဖြစ်လာရင်တော့ မိုးနတ်ရဲ့ ရူးသွပ်မှုက
ဖြစ်တည်လာတဲ့ တတိယမြောက် အောင်မြင်မှုလေးပေါ့ရှင်.
ကျန်တဲ့ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေလဲ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ကိုယ့်ရဲ့
ရူးသွပ်မှုလေးတွေ အကောင်အထည်ဖော် ဖြစ်တည်
မိုးနတ်ရဲ့ပို့စ်လေးကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ပေးပါလို့.......
အားလုံးကိုလဲ တောင်းပန်ပါရစေ......မိုးနတ်က တဂ်ပို့စ် တစ်ခါမှမရေးဘူးလို့ အမှားပါသွားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်....
မိုးနတ်ကို အလေးထားပြီး တဂ်ပေးတဲ့ ဆရာ့ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 6:31 AM
တောက်ပကြယ်စင် October 10, 2012 at 7:13 AM
မိုးနတ်က အလွမ်းပင်ကို အပြင်မှာ တကယ်စိုက်ပျိုးခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်။ မိုးနတ်ပြောပြတဲ့ မိုးနတ်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို သေချာနားထောင်သွားပါတယ်။ အော် မိုးနတ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေသားဗျာ။
kiim October 10, 2012 at 7:33 AM
အမက အခုအရမ်းလွမ်းနေတယ်.. အလွမ်းဆိုတာ ဒါလားလို့ 
ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) October 10, 2012 at 8:29 AM
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်လေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ပြုလုပ် ထားရတာမို့ပါ။ တဂ်ပို့စ်လေးေ၇းပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် မမိုးနတ်ရေ................ ။ ဆက်ရေးထားပါဗျို့
ချစ်စံအိမ် October 10, 2012 at 10:43 AM
Sweety Snow October 10, 2012 at 1:39 PM
အရေးအသားတွေကောင်းတယ် မိုးနတ်ရေ .အားပေးသွားပါတယ်.ရည်ရွယ်တာတွေ ဖြစ်လာပါစေ
ရိုးမြေကျ October 10, 2012 at 7:47 PM
ခရီးသွားဆောင်းပါးတွေရေးဖြစ်ရင် လက်တို့လိုက်ဦးနော်ညလေး။ မမရောကူလွမ်းပေးရဦးမလား။
မိုးသူ(တောင်ကြီး) October 10, 2012 at 8:35 PM
ရွာနေတဲ့ မိုးတွေကိုကြည့်ပြီး စာရွက်ဖြူဖြူလေးပေါ်ချရေးလိုက်တာ
ဖြစ်သွားတယ်....အဲဒိနေ့မှာပဲ ကဗျာတွေကိုလဲ စွဲလန်းသွားခဲ့တယ်.
အမှန်တိုင်းရေးထားတဲ့ ပိုစ့်လေးလို့ ယူဆတယ်
အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်ပါစေလို့ လဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်
Arëãl Thû October 11, 2012 at 1:16 AM
အခုဖြစ်ချင်နေတဲ့အိပ်မက်ကတော့ မေမြို.မှာ အဖေတို.အမေတို.နဲ.အေးအေးဆေးဆေးသွားနေချင်တာ။
roseayemaung October 11, 2012 at 7:24 PM
mstint October 11, 2012 at 11:13 PM
တဂ်ပို့စ်လေးဖတ်သွားတယ် မိုးနတ်ရေ။ မျှော်လင့်ချက် အိပ်မက်လေးအအတိုင်း
နွေမိုး October 12, 2012 at 10:27 AM
ရူးသွပ်တာတွေများနေလို့လားမသိဘူးအစ်မ.။ တစ်ခုမှဖြစ်မလာသေးဘူး.။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲလာလာ မအ ပဲ ပြန်ပြောနိုင်တယ်. ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ အကျိုးတော့ရတယ်အစ်မရေ.။
Nwai La October 13, 2012 at 2:18 AM
အဲ့ဒီခံစားချက်က အရမ်းခံစားလို့ကောင်းတယ် မကြီးမိုးနတ်ရေ
ကိုယ် ဘာဖြစ်ချင်လဲ သိလာတဲ့အခါမှာ
ကိုယ်ဟာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားသလိုပဲ
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရူးသွပ်စွာ လုပ်ရင်တော့
မိုးခါး October 16, 2012 at 10:10 PM
အိပ်မက်တွေ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ပေါ်ပါစေ ...း)))
* ရူးသွပ်ရင်ဖြစ်မယ် * ဆရာဝေမိုးနိုင်ရဲ့ (တဂ်ပို့စ...